Ciqaab Wadareed Laga Dan Leeyahay! -Muqdisho |
Bashir Maxamed — March 1, 2019
Muqdisho waxa ka jirra duruufo waaweyn oo amni darro oo culayskooda leh, Muqdisho waa magaallo nasiib darran, oo ayaankeed/filkeed in badan ka hadhay ! Magaalo ahaanteed uma xuma, oo shaki la’aan waa BOQORADII CASRIGA ; laakiin muuqaaladda qaraxyadda ka jira ayaa sawir fool xun ku ladhay !!
Saraakiisha loo xidhay laylinta Ciidanka Xoogga Dalka, ilaalinta Amniga Caasimadda iyo Sirdoonka Qaranku, qorshe midho dhal ah iyo siyaasadda amni oo duruufaha xaailooni darro ee weerarada argagixisadda lagaga dabaasho weli hab iyo xeelad guul dhal ah ma aysan sal-dhigin. Duruufaha nabadgalyo xumo ee caasimada hanaan iyo xeelad lagu karantiilo weli lama hayo.
Markasta kooxda xagjirka ah, fal kasta oo ay soo abaabulaan sida ay rabaan ayay u fuliyaan, fulintaas na waxa ku dhinta dad rayid ah oo birimageydo ah.
-Haligayaasha Xamar ka hawlgala waxa ay adeegsanayaan xirfado aad u tayo sarreeya oo ka muuqdaan farshaxanimo heer Sare ah. Qaraxyadda Xamar ee sida roobka uga da’aya waa Ciqaab Wadareed Laga Dan Leeyahay !!!
-Samayntii iyo isbedeladii ciidamada xasilinta caasimada ayaa waxa muuqata in dedaalkii amni iyo hawlgaladii la fuliyay aanay horjoogsan weeraradii waaweynaa ee Al-shabaab. Waxaa wax laga niyad jabo ah in sirdoonka dowladdu aanu weli awood u yeelan inay sii oggaadaan qorshaha Al-shabaab, kana hortagaan haddii xitaa ay sii og yihiin aannu jirin falcelin degdeg ah.
-Haddii shalay madaxdda la dilayay, maanta waa rayidka ! Mar wal oo aan xasuusto Muqdisho, sawirka ugu horeeya ee maankeyga ku soo dhaca, waa qarax iyo Saamaynta nafeed iyo hantiyeed oo uu geystay. Xamar marwalba waxa ay la foolataa qarax halaag badan sababa!
Qaraxyadda aan xasuusto waxa ka mid ah Weerarkii is-goyska SOOBE, ee ay kooxda Al Shabaab fulisay ! qaraxaasi waxa uu noqday qarax aad u saamayn badan, oo quluubta ummadda Soomaaliyeed aad u gilgilay, taas oo ilaa hadda murugadeedu lala sii noolyahay.
-Falka is-qarxinta Al Shabaab ka fuliso gudaha caasimada waa fashilla siyaasadda Ha’aayadaha Amniga Qaranka iyo Caassimadda ee Laamaha Amaanka, Nabadsugida iyo Sirdoonka. Muqdisho waxa ay noqotay halbowlaha qaraxyadda ay fuliyaan Ururka Al Shabaab, waxa ayna sanadahan noqdeen kuwo aan xad iyo wakhti laheyn.
-Shaki kuma jiro in Xukuumadda Farmaajo iyo Khayre ee maanta talada haysaa iyaga iyo sirdoonkeedu in ay ku fashilmeen ka hortaga qaraxyadda xoogga badan iyo dilalka joogtada ah ee bulshadda lagu ugaadhsanayo. Mushkiladaha iyo carqadaha hortaagan amniga magaalada Muqdisho ayaa koobnayn, waxaa weheliya qorshe iyo farsamo xumo haysta Ha’aayadaha Amaanka iyo Sirdoonka Qaranka, Awoodda ka hortaga falalka argagixisadda ee ciidamada oo aad u tamar liidata ayaa iyadna ah mid culayskeeda leh.
-Muqdisho oo wehel u ahayd sanadihii la soo dhaafay qaraxyadda iyo dilalka qorshaysan. si ugu yaraan loo yareeyo qaraxyadda, dilalka, Dhimashada, Dhaawaca, Burburka iyo Qaska kooxaha ka soo horjeedda dib u dhiska dowladnimada Somaliya, waxa lagama maarmaan ah in la cadeeyo ilaha kaalmeeya qaraxyadda, la tayeeyo wardoonka qaranka, la qalabeeyo ciidanka amaanka, la quweeyo, lana kordhiyo baadhitaanada kaantarooladda Gudaha iyo Daafaha Magaalada, Lana abuuro is-aaminid ka dhex dhalata Laamaha Nabad Sugida Booliska iyo Shacabka Caassimadda.
Illaahay Ha Quweeyo Awoodda iyo Kartida Ciidamadda Somaliya. illaahay ha u naxariisto intii dhimatay, qoysaskooda samir iyo iimaan ha ka Siiyo. Inta dhaawacantay na caafimaad degdeg ah ha siiyo, cadowga Somaliya Alle ha Jabiyo.
……………………..Aamiin Aamiin Aamiin………………..
Tags: Ciqaab Wadareed Laga Dan Leeyahay !! Muqdisho
Next post Maxaa Sababa Dhiig La’aanta, Siddeena Ku Xallin Karnaa?
Previous post Baro Sida Loo Dhaho Maya!
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Waa xeel-dheere ku xeel-dheer qorida Afka hodanka ah ee Soomaaliga. Cilmi qoto dheerna u leh, waxna ka qora siyaasadda, maamulka, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, takhasuna u leh culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha. Wuxuu haystaa shahaadada heerka koowaad ee jaamcadda.